Umhlahlandlela Wezinyathelo Ezi-9 Wokwakha Ibhulogi Elungiselelwe Usesho | Martech Zone
Umhlahlandlela Wezinyathelo Ezi-9 Wokwakha Ibhulogi Elungiselelwe Usesho
NgoMgqibelo, Disemba 13, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Noma sibhalile Ukubhuloga Kwebhizinisi KwamaDummies cishe eminyakeni eyi-5 eyedlule, kuncane kakhulu okushintshile isu eliphelele lokumaketha kokuqukethwe ngebhulogi yakho yebhizinisi.
Ngokuya ngocwaningo, uma usubhale ngaphezu kokuthunyelwe kwama-blog angama-24, ukukhiqizwa kwebhulogi kukhuphuka kuze kufike ku-30%!
Lokhu infographic kusuka Dala iBhuloho uhamba ngemikhuba emihle yokwenza ibhulogi yakho iseshwe. Angithengiswanga ukuthi iyisiqondisi esikhulu… kepha kuhle.
Isisekelo abasilahlekelayo ekuqaleni ukuqinisekisa ukuthi ubhala ku- uhlelo lokuphatha okuqukethwe olulungiselelwe ukusesha izinjini. Ukubhala okuqukethwe kwipulatifomu esezingeni eliphansi kuwukuchitha isikhathi futhi kuzoba yinkinga kungakhathalekile ukuthi ubhala kahle kangakanani.
Iseluleko sabo esiyinhloko ku-infographic ukuthi bhala okuqukethwe kwekhwalithi futhi ubhale kahle. Lokho kukodwa akukutholi emiphumeleni yenjini yokusesha, noma kunjalo. Kufanele wakhe igunya ngokuhamba kwesikhathi futhi okuqukethwe kwakho kudinga ukuba ngcono kunokuhle - kufanele kuphawuleke. Okumangalisayo okuqukethwe kwabelwana ngakho - futhi okuqukethwe okwabelwana ngakho kubalwa ohlwini! Kunokuqukethwe okuhle okuningi lapho okubhalwe kahle okungatholakali kwimiphumela yosesho!
I-infographic nayo ithi kufanele okungenani ube nayo Amagama ayi-2,000 XNUMX ngokuthunyelwe ngakunye. Angivumelani ngenhliziyo yonke, le nombolo akuyona umthetho futhi iyisibonelo esihle sokuhlangana ngaphezu kwesizathu. Inani lamagama kokuthunyelwe kwakho ngeke likuthole likleliswe. Iningi lezikhala zethu zingaphansi kwamagama angama-2,000 XNUMX futhi sikala ngokuya ngokuncintisana okukhulu.
Ngiyakholelwa ukuthi abantu ababeka ucwaningo oluningi nokuhlela kube okuthunyelwe okuphelele lokho ephawulekayo ungaba nethuba elingcono lokuthi lokho okuqukethwe kubelwe futhi kukalwe. Ubude abuyena umshayeli wokukleliswa lapho, yikhwalithi yokuqukethwe. Ngingakhetha okuthunyelwe okufishane kaningi kunalokho - awufuni ukuqhakaza lapho ungabhala kahle khona.
Iseluleko esisele siqinile - ukwakhiwa, isivinini, ukuphendula, ukusetshenziswa kwemidiya, omaki besihloko, ukubhaliswa kwe-imeyili, ukukhuthazwa komphakathi… zonke izeluleko eziqinile. Ngokuphathelene nokungapelwa kahle kwamagama namaphutha ohlelo - ngiyabonga abafundi bami bangixolele lapho. Futhi uma umbhali we-infographic ebhekisisa, bangathola ukupela okungalungile kwesinye sezihloko zabo!
Ekugcineni, impumelelo yebhulogi yakho incike entweni eyodwa kuphela: Ukuthi unikeza inani lezithameli zakho noma cha. Uma kunjalo, uzobona ibhulogi yakho ikhula futhi iqhakaza ibe insiza enkulu yokumaketha engenayo yenkampani yakho - ikakhulukazi ngezinjini zokusesha. Uma unganikeli ngenani, uzohluleka. Indlela engalungile noma efanele yokubhala ibhulogi ikwezilaleli zakho, hhayi le infographic!
Tags: blog amaphutha ohlelo lolimiukuphutha okungalungile kwebhuloginokwenza ibhulogiukubhuloga ibhizinisiukubhuloga kwebhizinisii-chantelle flanneryUkukhangisa Okuqukethweibhulogi yebhizinisiukubhuloga ezinkampaniukubhuloga ezinkampani kwama-dummiesdala ibhulohodouglas karrinfographicukusebenzisa ngokugcwele injiniukukhushulwa kwezindaba zokuxhumanaamagama blog okuthunyelwe
Siyini isiqubulo? Iziqubulo zemikhiqizo edumile kanye nokuvela kwayo
Kusetshenziswa Ukubeka Kuqala Kokubalulekile Kuphindeka Kabili Ukuguqulwa Kwakho Okuphumayo
Dec 14, 2014 ku-1: 17 AM
Okuthunyelwe okuhle ngiyakuthanda lokhu okuthunyelwe.
Dec 30, 2014 ku-10: 06 AM
Okuthunyelwe okuhle ngezithombe ezinhle. angazi ukuthi ubathole kuphi, kepha zilingana ngokuphelele! Umsebenzi omuhle